Caamsaa 22, 2020
Gujii Bahaatti waldhaba WBO fi Mootummaa jidduutti ummatii hidhaa fi gidiraan rakkachaa jira jedham
Kibba Oromiyaatti wal waraansi humnoota hidhattoota maqaa Waraana Bilisummaa Oromoon socho’anii fi mootummaa jidduu ammas itti fufuee jira.
Waajjirri Dhimma nageenyaa Gujii Bahaa VOA’f akka beeksisetti, hidhattoonni kun Gujii Bahaa Aana Gooro Doolaa magaalaa Bulbul jedhamutti dhukaasa torbee darbre miseensota Poolisii Oromiyaarratti bananii poolisootni 12 ajjeefamaniiru.
Obbo Waldee Dhugoo Itti gaafatamaan waajjira dhimma nageenyaa ‘hidhattoonni Shanee gocha gara jabeenyaa miseensota poolisii Oromiyaa nageenya tiksaa turanirratti dhukaasa bananii ajjeesan, isaan keessaa 1 milishaa naannooti’ jedhan.
Obbo Waldeen ta’een kun ka mudate turban darbe keessa ta’uus dabalanii ibsanii, warri dhokatee poolisootarratti dhukaase kun to’annoo jela hin oollee, ammas aanolee gammoojjii Gujii Bahaa keessatti jiraattotarraan balaa geessisaaa jiraa jedhan.
'Waldhaba WBO fi waraana Itoophiyaatti Gujii Bahaatti ummatii hidhaa fi doorsisaan rakkachaa jira'
Itti Aanaan Bulchaa Godina Gujii Bahaa Maallicha Diqqaas wal waraansi humnoota lameen jidduutti ta’aa akka jiru ifoomsan.
Kanaanis nageenyi Godinichaa ammaa boora’uu himanii, keessumaa aanotii gammoojjiiti ka jedhaman warreen akka Gumii Eldalloo, Gooro Doolaa, Sabbaa Booruu, Liiban fi Shaakkisoo keessaa haalli jiru ammaa rakkisaa ta’uu dubbatu.
Aab Maallicha nageenya naannoo kanaa bakkatti deebisuuf mootummaan humna raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota poolisii Oromiyaa sonaan bobbaasee tarkaanfii fudhataa jira, kanas itti fufaa jedhu.
Lakkoofsa namoota erga lolli kun aansee du’anii gaafatamanii sana quba hin qabuu jechuunis deebisu.
Obbo Waaqumsa Guutuu Naannaa Gujii’itti warra maqaa Waraana Bilisummaa Oromoon socho’uuf itti aanaa ajajaa ta’uu himan.
Wal waraansi humna isaan gaggeessanii fi mootummaa gidduu Gujii bakka hedduutti gaggeeffamaa jira jedhan. Ka Bulbulitti mudate gaafatamaniis tarkaanfii san poolisoota Oromiyaarratti fudhachuu mirkaneessanii jiru.
Obbo Waaqumsaan gama hidhattootaarraa nama miidhame gaafatamanii turan, madoo male nami nurraa du’e hin jiruu jechaan deebisan.
Himannaa mootummaan warri hidhaten kun ummatarraan geessisaa jiraa jedheefis yoo deebii kennan ‘nuti shiftaa mitii’ jedhu Obbo Waaqumsaan. Tarkaaanfii fudhannee jedhan kanaan Bulbulitti kan ajjeefaman poolisoota Oromiyaati.
Ilmaan Oromoo tarkaanfii akkasiitiin yoo lubbuun isaanii gidduu waraana kanaatti darbu maaltu sinitti gaaffii jedhuufis yoo deebisan, ‘nuti warra kan ni gorsina, qabsoo keenya hubatuu didanii yoo nu dura dhaabatan, yoo qawween nu adamsan tarkaanfii fudhachuun dirqamaa’ jechaan deebisu.
Lolli Warra hidhatee Bosona jiruu fi humna naga kabachiiftota mootummaa jidduu kun egaa amma ganna lamaaf deemaa jira. Jiraattonni naannoo garuu, lolli kun furmaata dhabee, bahaa gala nu dhowwee jedhu.
Himannaan isaanii inni guddaan, mootummaan keessumaa jiraattota aanotii gammoojjii Gujii Bahaa kana keessa jiraatan nama nagaayyuu hata’u ija shakkiin waan ilaaluuf rakkanne jedhu.
Ji’a Eebla darbe kana keessa, jiraattonni aanotii gammoojjii Gujii kunini Sagalee Ameerikaaf, humni naga kabachiifttota mootummaa namoota 700 ta’an hidhanii jiru hedduun warra hidhame kun nama nagaa dha jedhanii turan.
Kanneen keessa danuun isaaniis ammaa manneetii hidhaa fi waajjiraalee poolisii keessatti murtee male rakkachaa jiraachuu dubbatu. Aadde Xummee Dambalaa jiraattuu magaalaa Nageelleti.
Ilmi isaanii aadde Xummeen ji’a darbe kana warra hidhatee socho’uu waliin hidhata qabdaa jechuun poolisootni akka isaan hidhan hime. Haati umriin ganna 60 amma murtee male hidhaatti rakkataa jiruu jedha.
Jiraataan Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa kaanillee dhiyeenya kana ammas nami hedduun hidhamaa jiraachuu eeran. Jiraataadhumti kun yoo dubbatan, ajjeechaa ka raawwatu warra hidhate qofaa miti, humnootni mootummaas namoota nagaa ajjeesaa jiruu jedhu.
Akka jiraattonni jedhanitti dhiyeenya kana Bulbul, Gujii Bahaatitti Waata Jaldeessaa maanguddoo jedhaman humnootni mootummaa ajjeesanii boollatti darbanii duubarra reeffa maatiin argee jedhe, dabalees Nageelle Booranaa keessatti eegduu keellaa ka turan milishaa biyyaa Qaallicha Qumbii jedhan warri raayya ittisa biyyaa fi daldaltoonni koontiroobaandii dabarfachuuf ajjeesan jechuun jiraattonnii VOA’f himan.
Jiraataan kun dabalanii yoo dubbatan, humni naga kabachiistotaa kun sochii warra hidhatuu to’anna waan jedhuun namni bahee galuun rakkisaa akka ta’e, dubbatan. Obbo Addisuu Bullaallaa hojjetaa Waajjira Sab qunnamtii Paartii KFO ti.
Wal waraansi kibba Oromiyaa humnoota hidhattootaa fi Mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jiru miidhaan inni hawaasa naannoorraan gahaa jiru hedduudha jedhan. Kanaafis falli akka barbaadamu yaada kenninus nu dhagahuu didan jechaanis ibsu.
Mootummaanis tarkaanfii seera kabachiisuun fudha jechaan namoota hedduu hidhuusaa, kanaanis miseensota paartii isaanii dabalatee jiraattonni hedduun murtii male hidhaa jirachuu himan; warra ajjeefaman ammoo galmeeffataa jirraa jedhu.
Obbo Addisuun, mootummaan warra seera malee hidhe kanallee firoottan isaanii dhaqanii akka hin ilaalle dhorkee jira jechuun dubbatu. Kanaafis mootummaan tarkaanfii fudhatu seeraan akka godhu jechaan akeekkachiisu.
Komii hidhaa fi ajjeechaa jiraattonni mootummaarratti dhiyeeffatan, Itti Aanaan Bulchaa Bulchiinsa Gujii Bahaa Maallicha Diqqaa gaafatamanii warri hidhamee seera male hidhaa jiru hin jiruu jechaan haalan. Wa’ee warra ajjeefamanii ammoo qorataa jirraa jedhu.
‘Waata Jaldeesaa nama guddaa, shakkiin keenya warra hidhatetu jiraattotaa fi mootummaa walitti buusuuf kana godhe, Qaallichi ammo milishaa jabaa nuti qabnudha, du’a isaaf mootummaan ni gadda, namootni kana keessaa harka qaban ka to’anne jira sana seeraan itti adeemna’ Maallicha Diqqaa Itti Aanaa Bulchaa Bulchiinsa Gujii Bahaa
Obbo Maallichi namootni baanee galuuf humni mootummaa nu rakkise himata jedhus, sirrii miti jedhan, humnootni mootummaa bakka sakatta’I jirutti waraqaa eenyummaa gaafachuu male nami dararan hin jiruu jedhu.
Waraanni jiraattota gara dhowwe kun yoom dhumaa waan jedhuuf warri wal lolu kun lameenuu deebii hin qabu. Warri hidhatee bosona jiru, mootummaa kanarraa amantaa hin qabnu, kanaaf gidduu keenya nama keenyee waliin mariyannaa jennaan didee jedhu.
Mootummaan ammoo nagaan galaa jennaan waamicha na didan jedhee komata. Obbo Waaqumsaa fi Obbo Maallichis akkasuma dubbatu.
‘Araarri warra Maafiyaan ta’u kun araara nagaa miti; yoo namni sadaffaan nu gidduu jiraate malee hin fudhannu’ Waaqumsaa Guutuu
‘Yeroo kottaa nagaan galaa jennee kadhannee dadhabne; Abbootii Gadaa, jaarrolee biyyaa erginee didaniiru; egaa sichi humnumaan itti deemuu male falli biraa hin jira natti hin fakkaatu’ Maallicha Diqqaa
Gareen araara buusuuf hundaaye ka Abbaa Gadaa Tuulama Hoolaan durfamu ammas warra kana araarsuuf utuu carraaquu dhibee Kooronaan adda cituu VOA’n gabaasuun isaa ni yaadatama.